၃.၅ နာရီကြာလေယာဉ်ပေါ်မှာတည်းခိုခဲ့သည် Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇွန်လ 4, 2008 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ငါရာသီဥတုနှင့်အတူပြissuesနာများကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်လေကြောင်းလိုင်းများကလူကိုလုံခြုံစောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းတန်ဖိုးထားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ ၁၄ နှစ်အရွယ်သမီးသည်သူမအတန်းနှင့် ၀ ါရှင်တန်ဒီစီသို့ပထမ ဦး ဆုံးခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ သူသည်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းမှအိမ်ဖြူတော်၊ ၀ ါရှင်တန်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အခြားနေရာများသို့ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံများပေးပို့နေသည်။
ကျနော်တို့ခရီးစဉ်အတွက်ပိုက်ဆံအတော်အတန်ပေးပြီးသူမကျောင်းကဒီခရီးစဉ်ကိုအနှစ် ၂၀ ကျော်သွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ဒီခရီးစဉ်ကိုသူတို့အဆုံးသတ်လိုက်တာမသေချာဘူး။ ကေတီနှင့်ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေဟာလေယာဉ်ကွင်းမှာ ၃ နာရီခွဲကြာအောင်အိပ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာအမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုသူမနောက်ဆုံးပိုက်ဆံဖြုန်းနိုင်သလားလို့ကေတီကဖုန်းဆက်ပြီးပြောတယ်။ အခုသူကအစားအစာတောင်မ ၀ ယ်နိုင်တော့ဘူး။
ကျောင်းသားများမျက်ရည်ကျရသည်။ လေယာဉ်များသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ထွက်ခွာမည်ကိုမပြောနိုင်ပါ။ အခုလေယာဉ်ကဒီကိုရောက်တော့သန်းခေါင်မတိုင်ခင်ရောက်လိမ့်မယ်။ ငါလေကြောင်းလိုင်းများကိုခေါ်ကြိုးစားခဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုရတယ်။ ငါဒေသခံသတင်းကိုခေါ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သော်လည်းသူတို့တကယ်ဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူး။
အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းကျွန်ုပ်၏သမီးအားဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ မင်းသူမကိုလုံခြုံအောင်ထားဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာမမှတ်မိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်လေယာဉ်ပေါ်ကကလေးတွေကို 3.5 နာရီလောက်သော့ခတ်မထားပါနဲ့။
လေကြောင်းလိုင်းများကိုအမှန်တကယ်ကန့်သတ်ထားရန်လိုအပ်သည်၊ ၄၅ မိနစ်မှတစ်နာရီခန့်၊ ရှေးရှေးသူများကိုဂိတ်သို့ပြန်ပို့ရန်မလိုအပ်မီ။ တံခါးမှာနောက်ထပ်လေယာဉ်တစ်ခုရှိလျှင်၊ ကြောင်းထက်ပိုမှီဝဲခံရခြင်းရယ်စရာပါပဲ။ ငါသူမရဲ့ခရီးစဉ်ကိုမပျက်ပြားအောင်မလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်သူမအတွက်ကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။
Tags: bravenewcode ပါဝယ်သူများအစည်းအဝေးများ၏အသေခံစာနာစျေးကွက်Mark Ingwerတက်ဘလက်ဗားရှင်း
ဇွန် 4, 2008 မှာ 9: 53 pm တွင်
ငါလေယာဉ်မောင်းတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး၊ သို့သော်သင်၏ပုံပြင်များကကျွန်ုပ်ကိုနေရာတစ်ခုရရန် ပို၍ ပင်တွန့်ဆုတ်စေသည်။ ဤကဲ့သို့သောသတင်းအစီရင်ခံချက်များကဲ့သို့
လုံးဝပိုကောင်းတဲ့လမ်းဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်။ မြန်နှုန်းမြင့်ရထား ဂျက်လေယာဉ်ထုပ်မလား သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလား?
ဇွန် 4, 2008 မှာ 10: 10 pm တွင်
အမြန်ရထားလမ်းကိုကြည့်ချင်ပါတယ် ကျနော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကကားမောင်းတာ၊ ပျံတာတွေလုပ်မယ့်အစားချီကာဂိုကိုရထားစီးတယ်၊ သူကချစ်တယ်။ ငါစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါသူတို့မှာအင်တာနက်သုံးလို့မရဘူး။ Sprint USB အလုပ်လုပ်ကောင်းရှိနိုင်သည်။
ယခုပျံသန်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာ၎င်းသည်တတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပြိုင်အဆိုင်များလွန်းသောကြောင့်စျေးနှုန်းများနိမ့်ကျနေရသည်။ ၎င်းသည်မြစ်အောက်ပိုင်းအားလုံးကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်တော်ဟာဒေါ်လာ ၅၀၀ (သို့) ဒီထက်များတဲ့ခရီးကိုသွားပြီးကောင်းကောင်းဆက်ဆံတတ်ပါတယ်
5:2008 pm မှာဇွန် 7, 40
5:2008 pm မှာဇွန် 10, 05
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွင်းလေကြောင်းခရီးသည်အိပ်မက်ဆိုးဘဝ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မှတ်ဥာဏ်တွေပြန်ယူလာတယ်။ ငါလေကြောင်းခရီးစဉ်ကိုရှောင်ရှားဖို့ချီကာဂိုကနေအရှေ့ကိုပြန်မောင်းတယ်။ မင်းရဲ့ငယ်ငယ်လေးကအသက်ရှင်ကျန်ရစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
5:2008 pm မှာဇွန် 10, 40
အဲဒါခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့သင်မှန်ပါတယ် ကျွန်တော့် ဦး ခေါင်းနောက်ကျောကသူတို့ဟာအကြောင်းပြချက်တခုခုကြောင့်သူတို့ကိုင်ထားတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ပြောနေခဲ့တယ်။ ငါသူတို့ပဲ terminal ကိုမှာသူတို့ကိုကျင်းပခဲ့အလိုရှိ၏။
ဇွန် 6, 2008 မှာ 4: 38 pm တွင်
လေယာဉ်စီးတာလား?!? ငရဲ, ငါတို့အတ္တလန်တာကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးကိုယူသောအခါ, တညဉ့်ရထားခရီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင့်သမီးဖြစ်သင့်သည် ကျေးဇူးတင်.
AND ငါနှင်းကျ၌ 10 မိုင်ဘိနပ်မပါသောကျောင်းသို့လမ်းလျှောက်ခဲ့ရသည်။ ကုန်း။ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးလုံး! '-)
ဇွန် 6, 2008 မှာ 8: 01 pm တွင်
ငါက Mike စကားကိုနားထောငျ!